अर्थ / समाज
काठमाडौं : डा. विजय किसनलाल केडियालाई भारतीय सेयर बजारको एक सफल लगानीकर्ताका रुपमा चिनिन्छ । केडिया ‘केडिया सेक्युरिटिज प्रा. लि’ का संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पनि हुन् । व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरेका कारण सन् २०१६ मा केडियालाई डाक्टरको उपाधि दिइएको थियो ।
मारवाडी परिवारका केडिया १४ वर्षको उमेरदेखि सेयर मार्केटमा प्रवेश गरेका हुन् । सुरुमा आफ्नो पारिवारलाई सहयोग गर्न बजार प्रवेश गरेका केडियालाई पछि सेयर मार्केटमै रुचि लाग्न थाल्यो । सेयर बजारमा लामो अनुभव हासिल गरेका केडियाको सम्पति ५०० करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी पुगिसकेको छ ।
भारतमा केडियाको लगानी रणनीतिलाई पछ्याउने लगानीकर्ताको संख्या पनि धेरै छ । उनले व्यवस्थापनका विषयमा लन्डन बिजनेस स्कूल लगायत विभिन्न वैश्विक फोरमहरुमा लेक्चरहरु दिइसकेका छन् । यसका साथै संगीतका माध्यमबाट पनि केडियाले सेयर बजारका बारेमा रोचक ढंगबाट जानकारी दिँदै आएका छन् ।
व्यवस्थापन सेयरधनीप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । व्यवस्थापनले कस्तो प्रोडक्टलाई विस्तार गर्दैछ, प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा पनि लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो, पारदर्शी र इमान्दार व्यवस्थापन भएको कम्पनी छ भने त्यस्तो कम्पनीमा १०/१५ वर्षसम्म लगानी लगाउन उचित हुने केडिया बताउँछन् ।